काठमाण्डौं । गरे के हुंदो रहेनछ र ? नुवाकोटका एक जना किसानले तपाँई हामीले सलाद र तरकारीको रुपमा प्रयोग गरिरहेको एउटै मुला १५ केजीको फलाएर सवैलाई चकित पारीदिएका छन् । शिवपुरी गाँउपालीका २ छापका किसान कुमार भण्डारीले आफनो करेसाबारीमा १ मिटरलामो १५ केजीको मुला फलाएको भण्डारीका छिमेकी अर्जुन तामाङले जानकारी दिए । छिमेकी तामाङका अनुसार बारीबाट उखेलीएको उक्त मुला सर्वसाधारणलाई हेर्नका लागि अहिले सुरक्षीत राखिएको छ ।
१५ केजीको मुला र किसान भण्डारीको तस्वीर फेसबुकमा राख्दै छिमेकी तामाङले फेसबुकमा लेखेका छन् तरकारी खेती गरौं घरबार जोडौं । बेरोजगार भए भन्दै नेताहरुको घरदैलो चाहार्नु भन्दा तरकारी खेती गर्नु उत्तम बिकल्प होइनर ? कृषिमा बिभिन्न अनुदान पनि पाइने आम्दानी पनि राम्रो हुने । कुरा ठिक होइन र ?